Inhliziyo E-China Ethengiswa Kakhulu Kakhulu I-Ultrasonic Electric Mosquito Pest Yekhaya nehhovisi efektri nabakhiqizi |Jinjiang
Ethengiswa Kakhulu I-Ultrasonic Electric Mosquito Pest Yasekhaya Nehhovisi
Imodeli yomkhiqizo: 3033
Umsebenzi oyinhloko: Lo mkhiqizo usebenzisa amagagasi e-ultrasonic ukuze ukhuthaze ama-neurons ezinambuzane, futhi isimiso sokubangela izinambuzane ukuba zingakhululeki sifinyelela umphumela wokuxosha omiyane, amagundane, amaphela, izimbungulu, amazeze nezinye izinambuzane.Lo mkhiqizo usebenzisa ubuchwepheshe be-ultrasonic conversion frequency, obungakwazi ukukhomba izinambuzane ezihlukahlukene.Ukuguqulwa kwefrikhwensi okuzenzakalelayo kwebhendi ngayinye ayidingi ukushintsha amabhendi efrikhwensi, futhi kungaxosha izinhlobonhlobo zezinambuzane ngesikhathi esisodwa.Ngokusebenzisa imodi yokushintsha ukhiye, ingavulwa noma ivalwe ngokukhululekile.Ayinabuthi, ayinambitheki, ayinamsindo, ivikela imvelo futhi ayinayo imisebe, ilungele abesifazane abakhulelwe nezingane
Uhlobo Lwezinambuzane:Izintuthwane, Amalulwane, Amaphela, Izimpukane, Amagundane, Omiyane, IZIKWEBU
Igama lomkhiqizo:Ukwenqatshwa kwezinambuzane ze-Ultrasonic
Ukunikezwa kwamandla: AC90V-240V
Ukupakisha:Ibhokisi Lombala futhi lenziwe ngokwezifiso
Umbala:blue, green, orange, purple, pink and customized
Ikhono Lokuhlinzeka:20000 Iyunithi/Amayunithi ngosuku Umkhiqizi wokwala izinambuzane ze-Ultrasonic
Imininingwane yokupakisha:Iphakethe le-1/2/4/6 ebhokisini lombala le-ultrasonic pest pest noma i-OEM
* Ngokusekelwe kubuchwepheshe bakamuva be-ultrasonic wave, ukushayela izinambuzane ezinjengomiyane, izicabucabu, amagundane, amagundane,amadwala, izintuthwane, ngaphandle kwekhaya lakho, ihhovisi, indawo yokudlela, indawo yokugcina impahla, igaraji, njll.
* ngempumelelo futhi kalula ngemva 3 amasonto ukusetshenziswa.
* Indawo yokusetshenziswa ephumelelayo ngeyunithi ngayinye ifika kumamitha-skwele ayi-180 igumbi ngalinye
* U-100% awulimazi abantu nezilwane ezifuywayo, awunaphunga, awuhambisani nemvelo.
* Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, akukho mphumela kwezinye izinto zasendlini.
* KULULA UKUSEBENZISA : Vele uxhume isokhethi bese uyeke yenze okunye.
Ukwenqatshwa kwezinambuzane ze-Ultrasonic
Q1, Ingabe uyimboni noma inkampani yokuhweba?
A: Siyifektri yangempela, eyasungulwa ngo-2003, umkhiqizi ochwepheshe wezinto zikagesi zasekhaya ezihlakaniphile, imikhiqizo eyinhloko ehlanganisa i-ultrasonic pest repeller, imoto yokuhlanza umoya, izinto zokunakekela isikhumba.
Q2, Yiziphi izinzuzo zakho futhi kungani kufanele sikukhethe?
IMP: (1) Umuzwa wokukhiqiza ocebile oneminyaka engu-15 ubudala, osenza sazi kangcono umkhiqizo nemakethe, futhi sazi ukuthi yini oyidingayo nokufanele.
(2) Njengefekthri, asilokothi siphishekele inzuzo enkulu, umkhawulo omncane ngokunengqondo ukuze sisekele abasebenzi bethu kanye nezisebenzi zethu, ngakho-ke akufanele neze ukhathazeke ngenani ELIPHEZULU ongase ulithole kithi.
(3) Okuhlangenwe nakho okucebile ku-OEM & ODM, okudingayo nokufunayo yilokho esikwazi kahle kukho.
(4) Amandla amakhulu wokunikezela, amasethi angu-20000/ngosuku, futhi angakhuliswa ngokwesidingo sangempela.
Q3, Yiziphi izitifiketi onazo?
A: Sinazo zonke izitifiketi ezidingekayo ezifana ne-CE, RoHS, FCC, MSDS, njll noma ezinye ongazidinga ngokukhethekile.
Q4, Ngingaba namasampula wamahhala engizowahlola?
IMP: Yebo, ngokokuqala ngqa lapho usebenza nathi, izindleko ze-courier zizokhokhwa kusengaphambili futhi sizokubuyisela izindleko lapho ufaka i-oda lakho lokuqala elisemthethweni.
Q5, Lithini isikhathi sakho sokulethwa?
A: Idiphozithi engekho ngaphansi kuka-30% lapho ukuqinisekiswa kwe-oda, kanye nenkokhelo yebhalansi ephelele ngaphambi kokuthunyelwa.
Okwedlule: I-Amazon best sale ultrasonic electronic mosquito ant roach repellent, pest defender
Olandelayo: Ukulawula Izinambuzane Okusha I-Ultrasonic Repeller Ethuthukisiwe Ukulawula Izinambuzane Zangaphakathi Kwe-Electronic Ngokukhanya Kwasebusuku Kuxosha Amagundane Nezinambuzane
Idivayisi Yenqaba Izinambuzane
I-Plug In ye-Pest Reject
I-2021 entsha ephathekayo yegundane yepulasitiki enesibambo
Isilawuli esisha se-Ultrasonic Repeller Esithuthukisiwe...
2020 New Intelligent Mini Insect Ultr...